ကားပေါ်မှာ ခိုးစားခဲ့သည့် စုံတွဲ အမိဖမ်းခံလိုက်ရ | Buzzy
တရုတ်နိုင်ငံက အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ. ဖောက်ပြန်တာကို ရိုက်ယူထားသည့် video ဖိုင်....
အမျိုးသမီးဖြစ်သူအနေဖြင့် သူမ၏ အမျိုးသားနှင့် အခြားအမျိုးသမီးတို့ ကို သူမ၏ ကားထဲတွင် တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။သို့သော်လည်းသူမ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဖြေရှင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။တရုတ်ပြည်တွင် ယခုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များသည် များပြားစွာရှိနေသည်။လူတစ်ချို. ရဲ. ရင်ဖွင့်သံတွေကတော့ အလွန်ကို နာကြည်းနေပုံပါပဲ။တရုတ်မှာ ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ. ချမ်းသာမှု အရ အမျိုးသမီး များနှင့် လူမှု ရေးအရပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြမှု မျိုး ပြု လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။တရုတ်အမျိုးသားများဟာ ယခုကဲ့သို့သော ကိစ္စကို အဖမ်းအစီး မရှိပြု လုပ်နေကြတာပါ။
အမြိုးသမီးဖွဈသူအနဖွေငျ့ သူမ၏ အမြိုးသားနှငျ့ အခွားအမြိုးသမီးတို့ ကို သူမ၏ ကားထဲတှငျ တှလေို့ကျရသောကွောငျ့ စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့ရသညျ။သို့သျောလညျးသူမ အေးဆေးတညျငွိမျစှာ ဖွရှေငျးခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။တရုတျပွညျတှငျ ယခုကဲ့သို့ အဖွဈအပကျြမြားသညျ မြားပွားစှာရှိနသေညျ။လူတဈခြို. ရဲ. ရငျဖှငျ့သံတှကေတော့ အလှနျကို နာကွညျးနပေုံပါပဲ။တရုတျမှာ ရှိတဲ့ ယောကငြ်ျားလေးတျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့ရဲ. ခမျြးသာမှု အရ အမြိုးသမီး မြားနှငျ့ လူမှု ရေးအရပတျသကျပွီး ဘယျလောကျခမျြးသာတယျဆိုတာကို ဖျောပွမှု မြိုး ပွု လုပျလရှေိ့ကွပါတယျ။တရုတျအမြိုးသားမြားဟာ ယခုကဲ့သို့သော ကိစ်စကို အဖမျးအစီး မရှိပွု လုပျနကွေတာပါ။
တရုတ်အမျိုး သမီးနှင့် သူမရဲ. အစ်ကို တို့ ဟာ ကားတံခါးကို ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် တရုတ်အမျိုးသမီး ၏ လင်ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည် အခြား အမျိုး သမီးတစ်ဦးနှင့်ကားပေါ်မှာ ဖာက်ပြန်နေခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သူမသည် ဆူညံစွာ ပေါက်ကွဲခြင်းမပြု ပဲ ယခု ကိစ္စ ကို အေးဆေးစွာ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေအရ မည်သို့ ဖြစ်နိုင်သည် ကို မူ အတိအကျမသိရပေ။
တရုတျအမြိုး သမီးနှငျ့ သူမရဲ. အဈကို တို့ ဟာ ကားတံခါးကို ဖှငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ တရုတျအမြိုးသမီး ၏ လငျယောကငြ်ျားဖွဈသူသညျ အခွား အမြိုး သမီးတဈဦးနှငျ့ကားပျေါမှာ ဖာကျပွနျနခွေငျးကို တှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။ သူမသညျ ဆူညံစှာ ပေါကျကှဲခွငျးမပွု ပဲ ယခု ကိစ်စ ကို အေးဆေးစှာ ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ တရုတျနိုငျငံ၏ တရားဥပဒအေရ မညျသို့ ဖွဈနိုငျသညျ ကို မူ အတိအကမြသိရပေ။